यस कारण अभिनेत्री जाह्नवीले आफ्नो ड्राइभरसँग पैसा सापटी लिनु प¥यो
बिहानको ०३ : ५३
nepalipatra.com . ५ महीना अघि
काठमाडौं । श्रीदेवी र बोनी कपुरकी छोरी जाह्नवी कपुरले फिल्म ‘धडक’बाट बलिउडमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी हुन् । अभिनेत्री जाह्नवीले आफ्नो पहिलो फिल्मबाटै दर्शकहरुको माया पाउन सफल बनेकी छन् । उनी सोसल मि...
बलिउड अभिनेत्री: अभिनयमा फ्लप भएपछि अर्बपतिसँग बिहे
ajakoartha.com . ५ महीना अघि
एजेन्सी – बलिउड उद्योग निकै ठूलो छ जहाँ जो–जो कलाकार आफ्नो भविष्य बनाउन छिर्छन् ती मध्ये केहीलेमात्र आफ्नो नाम सुनौले अक्षरले लेख्न सफल भएका छन् भने धेरैले संघर्ष गर्दागर्दै करियरलाई बीट मारेर बलिउ...